Kabarin'Andriamatoa Praiminisitra nandritra ny fahatsiarovana ny tolom-panafahan' ny 29 martsa 1947 | Primature
Ianareo Raiamandreny lolohavina an-tampon’ny loha,
Isika mianakavy izay vory eto anio,
Voalohany indrindra dia mitondra ny tenin’ny Filohan’ny Repoblika, Andriamatoa Andry Rajoelina, ny tenako, dia ny manantitra ny fiarahabana antsika rehetra tratr’izao andro lehibe izao.
Tazantsika ny tolom-panafahana izay niseho teto amin’ny firenentsika, 72 taona lasa izay.
Miarahaba manokana anareo tapa-porohana sisa tsy may, izay mijoro amin’ity anio ity. Ny fisian’izany tolom-panafahana izany dia mampiseho tokoa ny fahatsiarovana ny tantaran’ity firenentsika ity, tamin’ny ady izay nametraka tokoa ny maha-avo ny fitiavan-tanindrazana.
Ankehitriny dia mametra-panontaniana tokoa isika mianakavy ny hoe nataontsika inona tokoa iny rà latsaka tamin’iny ady lehibe nahatonga martiora maro tamin’ny firenentsika iny ?
Nahazo ny fahaleovantenantsika isika 59 taona lasa izay. Izany fahaleovantena izany dia noeritreritin’ny besinimaro fa dia fahaleovantena hitondra any amin’ny fahafahana izay azo hitarafana amin’ny alalan’ny fampandrosoana sy ny fandrosoan’ny firenentsika, saingy indrisy ! miara-mahalala isika rehetra ary miara-mahatsapa ny toerana misy an’i Madagasikara, izay tanindrazantsika, amin’izao fotoana izao.
Ny Filoham-pirenena, Andriamatoa Andry Rajoelina, dia mametraka mazava tsara ao anatin’ny vinam-pampandrosoana ny firenentsika ny tokony hamohazana ny hambopom-pirenentsika, ny hambopon’ny tsirairay sy ny an’ny Malagasy, izay ao anatin’ny fahatsiarovana ireo olo-mangan’ny Firenena ireo, ary tokony hisian’ny dingana iray lehibe mba hahafahantsika mifanome tanana ao anatin’ny fiombonana amin’ny fampandrosoana ny firenentsika. Fotoana izao, na dia tara aza, ny tokony hijoroantsika amin’izany fampisehoantsika ny fampiainantsika izany tena fitiavan-tanindrazana izany.
Efa napetraky ny Filoham-pirenena ny velirano 13, izay mamaritra ny politikam-pirenena ho amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Izany dia mila ny fiombonantsika, mila ny fitiavantsika amin’izay farafahakeliny azo handrefesana izany fiombonantsika izany.
Koa ny anio dia mahatsiaro ny ezaka rehetra efa vita isika, fa,miara-manaiky kosa isika fa be dia be ireo ezaka mbola miandry ; amin’izany indrindra no isarihako ny saintsika amin’ny ady vaovao ary tokony ho fomba fanao vaovao, izay tokony hosendraintsika, ary tsy hametrahantsika ho ambanin-javatra ny ezaka tokony hatao. Ao anatin’izany ny ady amin’ny kolikoly izay fanetriben’ny Firenena ka mamono ny firenentsika. Tsapantsika tao anatin’ny taona maro fa ny kolikoly dia nahatonga ny firenentsika ho voavidy, voazanaka amin’ny endriny maro samihafa. Koa raha tiantsika ny hiroso amin’izany fanehoantsika ny fitiavan-tanindrazana izany dia tsy afaka isika ny tsy hijoro amin’izany ady vaovao izany isika, dia ny ady amin’ny kolikoly izany, na amin’ny endriny inona na amin’ny endriny inona ; ary isika rehetra dia tokony ho mpiady amin’izany fanetriben’ny Firenena izany fa tsy olona anankiray na olona anankiroa ihany.
Ny ady izay tsy maintsy hoeritretintsika ihany koa dia ny ady amin’ny goragora, ny ady amin’ny tandrevaka, ny ady amin’ny fanekena ny tsy fisian’ny rariny sy hitsiny, ny ady amin’ny tsy fisian’ny fahitsiana sy fahamendrehana eo amin’ny fandraisantsika ny asa izay ataontsika amin’ny andavanandrom-piainantsika eto amin’ity tany sy fanjakana ity.
Ny Firenena izay eritrerentitsika ho Firenena tsara tantana dia Firenena izay misy tompon’andraikitra tsy hijery afa-tsy ny tombontsoa iombonana sy ny maha-avo izany tombontsoa izany, ao anatiny ; mba hampisehoantsika tokoa fa ao anatin’ny fotoana fohy dia azo tanterahina tokoa ny fampandrosoana sy ny zotram-piainana vaovao hitondrantsika ity firenenna mamintsika ity.
Izany rehetra izany no noresahina satria tsy hankalaza ny tsingerintaon’ny ady lehibe tao anatin’ny tolom-panafahana ny firenentsika fotsiny isika, fa fotoana izao, tena hampisehoantsika tokoa fa izany Malagasy izany dia olona sahy, olona mahatsapa fa tompon’andraikitra ary olona manana ny fahaiza-manaony, mba hahafahantsika hanova ny tantara ny firenentsika ity ao anatin’ny fiombonana, ary indrindra hijery làlana hatrany hampandrosoantsika azy ao anatin’ny fotoana fohy dia fohy.
Koa izay ny teny vitsivitsy izay tianay naroso tamin’izao fotoana ahatsiarovantsika sy ny firenentsika ireo nanao vy very ny ainy sy ireo rà latsaka tamin’ny firenentsika izao, mba hahafahantsika mampiseho indray fa tsy taranaka voaozona isika fa taranaka voafidy ny taranaka Malagasy.
← Cérémonie de lancement de la célébration du 20ème anniversaire du GEFP
Conseil du Gouvernement du Mercredi 03 Avril 2019 →